सुधा त्रिपाठी (जिवनसूत्र र स्वप्नाभासबाट)
म फूल लिएर आउने छु:
प्रगतिशील, मानवतावादी साहित्यकार, रास्ट्रीयता, जातीयता र माटो प्रति समर्पित भावना जागरण गराउन चाहने साहित्यकार
लैंगिक असमानता, सामाजिक विभेद, शोषण र अन्यायको विरोध गरि स्वच्छ र समता मुखी समाजको परिकल्पनालाई आग्रह गर्ने नारि प्रतिभा
उपेक्षित, अशिक्षित र अपहेलित नारीको उत्थानको लागि आवाज उठाउने साहित्यकार
जन्मिएको भूमिप्रति अगाध आस्था प्रकट गरिएको विचार प्रधान आत्मपरक निबन्ध
आफ्नो शैशवकाल बितेको दोलखाको सुनखानीको मातृ वात्सल्य र काखप्रति अत्यन्त मोह व्यक्त गरिएको
प्रत्येक नागरिकले जन्मभुमिप्रती श्रद्धा र समर्पित भावना व्यक्त गरिनुपर्ने विचार भएको यस निवन्धमा जन्मभूमिको बाध्यता, विवसता र समस्यालाइ बुझेर त्यसको अन्त्यको लागि लाग्नुपर्ने आग्रह गरिएको
माटोको माया अक्षरमा ब्यक्त भएको यस निवन्धमा मातृऋण तिर्ने आतुर मानशिकता देखाइएको
सुनखानीको भौगोलिकता, प्रक्रितिकता र संस्क्रितिकताले आफुलाई सदैब तानिरहेको तर आफु सुनखानीमा टेकना नसकेको पीडा व्यक्त
अतितको स्मरणले उजाड निरस र अभावको सहरमा आफुलाई बाँच्ने उर्जा थपिरहेको कुरा व्यक्त
अस्त व्यस्त दुषित सहरी सभ्यतामा आफ्नो जीवनलाई अगाडी बढाउन उही सुनखानीको सम्झना प्रेरणादायी, उत्साहप्रद भएको कुरा व्यक्त
विश्वपरिवेसमै विकृति फैलिएको र त्यस विकृतिले सुन्खानिलाई पनि दुषित बनाउन लागेकोमा चिन्ता प्रकट गरिएको
जन्मभूमि प्रतिको आत्मियता देस्वाशीको उत्थानमा लाग्ने तिब्र चाहना, धर्तिलाइ सदाब प्राण भन्दा पनि प्यारो मानुपर्ने विचार, आमाको अनुहार सधैं सन्तानले हसौनुपरने जस्ता विचार मूल भाव भएको
सुधा त्रिपाठी (वि. सं। २०१५) निबन्धकार, नटक्कार , कबि ,कथाकार तथा समालोचना हुन् । उनका बादल धर्ति र आस्थाहरु ; जिवनसूत्र र स्वप्नाभास ; सुट, टाई र सुँगुर ; अमर सिर्जनाजस्ता निबन्धसङ्ग्रह हरु प्रकाशित छन् । उनि मूलत : नारीवादी लेखक हुन् । उनि एकातिर आफ्ना निबन्धमा नेपाली नारीका पिडा , समस्या र पितृसत्ताका कारण सिर्जित लैङ्गिक तथा वर्गीय विभेदको अन्त्यको चाहना व्यक्त गर्छिन् भने अर्कातिर देशभक्ति र धर्तिप्रतिको आस्था पनि प्रकट गर्छिन् । उनि प्रगतिवादी चेतनाको वरण गर्दै आफ्ना निबन्धमा समाजका बिकृति र विसङ्गतिप्रति ब्यङ्गय पनि गर्छिन् ।' मा फूल लिएर आउने छु ' उनले आफ्नो जन्मभूमिको सम्झन गरि रचेको एक घतलाग्दो निबन्ध हो ।
पठनबोध: १) तलका निबंधांश पढी सोधिएक प्रश्नहरुको उत्तर लेख्नुहोस् ।
(क) सुनखानी, म फूलसँगै राखेर मनुष्यलाई हेर्छु । मनुष्यका पिदरुपी जीवन हेर्छु। म मेरो गाउँ हेर्छु र देश हेर्छु । म मेरो देशका टुक्रा टुक्रामा तिम्रै जीवन पाउँछु र तिम्रै पिडा देख्छु । त्यसीले सुनखानी , तिमि मेरो देश हेर्ने एना । तिमि मेरो जीवनको आस्था । तिमि मेरो सानो देश र सानो संसार नै हौ।
अ) निबन्धकारले मानिसलाई फूलसङ्ग दाँजेर हेर्नुको कारण के हो ?
उत्तर: निबन्धकारले मानिसलाई फूलसँग दाजेर हेर्नुको कारण माजसमा दुःख कष्ट बेदना परिवेश र परिस्थिती पाउनु हो ।
आ) निबन्धकारले सुनखानीको चित्रण कसरि गरेकी छन् ?
उत्तर: निबन्धकारले सुनखानीमा देश देखेकी छन् । त्यहाँ जिवन छ र देश प्रतिको ममता झल्किएको छ ।
इ) निबन्धकारले सुन्खानीलाई किन माया गरेकी हुन् ?
उत्तर: निबन्धकारले सुनखानीलाई जन्मथलो भएकाले माया गरेकी हुन् ।
ई) ' तिमि मेरो देश हेर्ने एना ' भन्नु को तात्पर्य के हो ?
उत्तर: तिमी मेरो देश हेर्ने ऐना भन्नुको तात्पर्य सुनखानीलाई नियालेपछी समग्रत देश बुझिन्छ भन्नु हो ।
उ) देश र सुनखानीका बीच कस्तो सम्बन्ध रहेको छ ?
उत्तर: देश र सुनखानीका बीच तादामत्म्य भावको सम्बन्ध रहेको छ । जहाँ सुनखानी नै एउटा सानो देश र सानो संसार मानिएको छ ।
ख) भौतिक शरिरको सौन्दर्य जीवनको सम्पूर्णता होइन , मान्छेको मानचाहिं कदापी कुरुप हुनु हुँदैन । यो सहरको स्पर्शले यस शरीरलाई कुरुप बनाए पनि मन भने तिमीले जस्तो बनाइदिएकि छौ त्यस्तै छ । त्यसैले त म तिमीभन्दा यति पर बसेर पनि तिम्रै मायाले द्र्वैभुत भएकी छु र यी प्रत्येक अक्षर रुपमा पग्लिंदै पग्लिंदै झरीरहेकी छु ।
अ)'भौतिक शरिरको सौन्दर्य जीवनको सम्पूर्णता होइन' भन्नुको तात्पर्य के हो ?
उत्तर: मानिसको भौतिक शरीर सुन्दर हुँदैमा उसको मन, वचन पनि सुन्दर हुन्छ भन्ने छैन । सुन्दरता नै सम्पूर्णता होइन भन्नु हो ।
आ) निबन्धकारका दृष्टिमा मान्छेलाई शरीर वा मन केले सुन्दर बनाउँछ र किन ?
उत्तर: निबन्धकारका दृष्टीमा मान्छेलाई सुन्दर शरीरले होइन मनले बनाउँछ । मन पवित्र भए जस्तो सुकै कुरुप मान्छेले पनि राम्रो काम गर्न सक्छ ।
इ) निबन्धकरको मान किन नफेरीएको हो ?
उत्तर: शहरको स्पर्शले शरिर कुरुप भए पनि जन्मथलोको ममताले निबन्धकारको मन नफेरिएको हो ।
ई) निबन्धकरको सुनखानी प्रतिको माया कसरि पग्लिएको छ ?
उत्तर: निबन्धकारको सुनखानी प्रति माया आक्षर बनेर पग्लिएको छ ।
उ) 'कुरुप' र ' द्रविभुत' शब्दको आर्थ के हो ?
कुरुप = नराम्रो रुप
द्रविभुत = पग्लीनु + दव्यमय बन्नु
१) ' जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छ ' भन्ने भनाइप्रति ' म फूल लिएर आउने छु' निबन्धका आधारमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
उत्तर: सुधा त्रिपाठीद्वारा लिखित ‘म फूल लिएर आउनेछु’ देश भक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएको एक सुन्दर निबन्ध हो । यस निबन्धमा सुनखानी प्रतिको माया, ममता, सम्झनाहरु सशक्त ढङ्गले प्रश्तुत भएका छन् । कर्मथलो काठमाण्डौलाई मरुभुमीका रुपमा र जन्मभुमी सुनखानीलाई उपहार स्नेह मायाले भरिएको स्वर्गसमान देखाइएकोछ ।
२ )' म फूल लिएर आउने छु ' निबन्धमा निबन्धकारले सुनखानीको सम्झना कसरी गरेकी छन् ?
१) विग्रह गरिएका तलका शब्दहरुलाई समास गर्नुहोस् :
देश र विदेश देश–विदेश
दाजु र भाई दाजु–भाई
मान एवम् मर्यादा मान–मर्यादा
पाप र पुण्य पाप–पुण्य
न फेद न टुप्पो फेद न टुप्पो
मादी र मस्र्याङ्दी मादि–मस्र्याङ्दी
दुःख वा सुख दुःख–सुख
धर्म वा कर्म धर्मकर्म
सय र पचास सय–पचास
गौरी र शंकर गौरीशङ्कर
दाल, भात र डुकु दाल भात डुकु
न देख्नु न सुन्नु देख्नु न सुन्नु
घाम पनि पानी पनि घामपानी
२) तलका समस्त शब्दहरुको बिग्रह गर्नुहोस् :
मुनामदन मुना र मदन
कागज मसी कागज मसी
शिक्षा दीक्षा शिक्षा र दीक्षा
घाम छायाँ घाम पनि छायाँ पनि
सुख दुख सुख वा दुःख
गाँस बास कपास गाँस गाँस, बास र कपास
मर्नु न बाच्नु न मर्नु न बाँच्नु
नुन चिनी पानी नुन, चिनी र पानी
नाफा नोकसान नाफा वा नोक्सान
नुनतेल नुन र तेल
४. तल विग्रहअन्तर्गत दिइएका शब्दहरुलाई समास गरी एउतै शब्द बनाउनुहोस्:
५) तलका समास शब्दहरुको विग्रह गर्नुहोस् :
नाङ्लाकाने नाङ्ला जस्तो कान भएको
वायुपङ्खी वायु नै पङ्ख छन् जसका
दोजिया दुइ जिउ छन् जसका
चैते बाँदर चैतको बाँदर जस्तो छ जो
नकटा नाक काटिएको छ जसको
दोपाया दुइवटा पाउ छन् जसका
पाँचतले पाँच वटा तला छन् जुन भवनमा
लमकन्या लामा कान छन् जसका
चरीनङ्ग्रे चराका जस्ता नङ्ग्रा छन् जसका
कलजिब्रे कालो जिब्रो छ जसको
बाघमुखे बाघको जस्तो मुख छ जसको
लामखुट्टे लामा खुट्टा छन् जसका
दुधमुखी दुधमा मुख छ जसको
बहुमुखी बहु मुख छन् जसका
हात्तीसुँडे हात्तीका जस्ता सुँड छन् जसका
नौलखा नौ लाख बाट वनेको भवन हो जुन
तलका अनुच्चेदका रेखाङ्कित शब्दको विच्छेद गर्नुहोस् :
क) (अनुच्छेद पुस्तकबाट पढ्नुहोस)
प्राकृतिक = प्रकृती+इक
सौन्दर्य = सुन्दर +य
पर्यटन = पर्यट+न
वैदेशिक = विदेश + इक
अत्याचार = अति +आचार
फाल्नाले = फाल्नु +ले
ठेक्का = ठेक् + का
आर्थिक = अर्थ +इक
उपार्जन = उप+ आर्जन
मनोरथ = मन + रथ
ख) (अनुच्छेद पुस्तकबाट पढ्नुहोस)
हँसिलो = हाँस् + इलो
कमाइ = कमाउ + आइ
बढेर = बढ् + एर
यसरी = यो + अरी
सङ्कट = सम् + कट
ग) (अनुच्छेद पुस्तकबाट पढ्नुहोस)
यासोधरा = यशोधर + आ
मनोरमा = मनोरम + आ
सरोबर = सरोवरी + अ
वयोबृद्ध = वय +विद्ध
बागीश्वरी = बाग+ इश्वर + इ
वृद्धाश्रम = वृद्धा + आश्रम
रामायण = राम + आयण
सद्भाव = सद् + भाव
सदाचार = सद् + आचार
सेवार्थ = सेवा + अर्थ
घ) (अनुच्छेद पुस्तकबाट पढ्नुहोस)
लमिनी = लामा + अनी
थपिनी = थापा + अनि
खुँजेली = खुँजेल + इ
गोरेटो = गोडा + एटो
बटुवा = बाटो + उवा
थकाइ = थाक + आइ
आवतजावत = आउ + जाउ
ठूल्यामा = ठूली + आमा
कान्छ्यामा = कानिछी आमा
भित्र्याउना = भित्र + आउना
सान्कान्छाा = सानो + कानछा
छुट्टी = छुट + इ
रोक्का = रोक् + आ
उल्लाइ = उस् + लाई
सट्टा = साटो + आ
ठूल्कान्छा = ठूलो + कान्छा
कट्टी = काट् + इ
'म फूल लिएर आउने छु' निबन्धबाट भुतकाल र अभुतकालको प्रयोग भएका तिन तिन वाक्य खोजेर लेख्नुहोस् ।
उत्तर : भुतकाल:
१) अस्ती त्यतैबाट आउने कुन्नी कसले पो सुनाउँदै थियो ।
२) तिमीलाई काट्न मार हान्ने खुकुरी लिएर आइ लागेको थियो रे ।
३) तिमी चाहिँ रुन पनि नसकी भक्कानिँदै तल तिर कुद्दै गरेकी थियौ ।
१) मेरो त सम्पूर्ण संसार नै प्रलय भएर डुब्ने छ ।
२) म निश्चित रुपले आउने छु ।
३) तिम्रै रगत पिउन थालीसकेका हुनेछन् ।
४.' म फूल लिएर आउने छु ' निबन्धको दोस्रो आनुच्छेद पढेर बुँदा टिपोट गरि सङ्क्षेपीकरण गर्नुहोस् ।
उत्तर : बुदा टिपोट:
१) मैले तिम्रो ठ्याम्मै माया नमारेको,
२) मेरो मनको गहिराइमा बसेर मेरो प्यारो सुनखानीको सद्भाव र स्नेहले आफू निथ्रकै भिजिरहेको ।
३) तिम्रा पवित्र पाउहरुमाएक अंजुली सेता फूल चढाउने धोको ।
४) सिङ्गो सहरको छाती भरी खोज्दा पनि चोखो भूममिा फूलेको सेतो फूलले अँजुली भर्न नसकेको ।
५) स्पर्श र स्नेह पर्खीरहेको ।
मैले तिम्रो ठ्याम्मै माया नमारी मनको गहिराइमा बसेर प्यारो सुनखानीको सद्भाव र स्नेहले निथ्रक्कै भिजेको छु । तिम्रा पवित्र पाउहरुमा एक अँजुली सेता फूल चढाउने धोको पुराउन सिङ्गो सहरको छातीभरी खोज्दा पनि चोखो भूमीमा फुलेका फूलले अँजुली भर्न सकेको छैन । तिम्रो स्पर्श र स्नेह पर्खिरहेको छु ।